15+ amin'ny Anime Lehibe indrindra toa ny Akademia Maherifo ahy! - Hafa
Tiako ny Akademia maherifoko? Avy eo Ireto misy seho Anime natolotray 15!
Ny tontolon'ny manga sy ny anime dia malaza amin'ny azy fahasamihafana, ary marihina noho ny fahasarotany.
Hatramin'ny anime sy manga lasa manerantany, ny lazany dia nitombo na dia tany Andrefana aza, izay misy ny boky tantara an-tsary sy ny fomba nentim-paharazana miiba.
Androany isika dia hifantoka amin'ny a shōnen sarimiaina antsoina hoe My Hero Academia .
Ho anao izay tsy mahalala, My Hero Academia dia andiany manga / superhero / fanta-daza ary andian-tsarimihetsika izay manaraka an'i Izuku Midoriya tanora. Ary ny fikatsahany ho tonga maherifo lehibe indrindra ,.
My Hero Academia dia iray amin'ireo manga sy anime maoderina malaza indrindra, manana fandom-piainana lehibe manerantany izay manaraka matetika ny zava-niainan'i Izuku sy ireo endri-tsoratra hafa.
Ireto misy andiany anime 15 tsara indrindra mitovy amin'izany My Hero Academia!
Natomboka niaraka tamin'ny franchise ny Akira Toriyama Dragon Ball.
Izany andiany manga izay manara-dia ilay zazalahy Son Goku tamin'ny zava-niainany mba ho lasa mpiady lehibe indrindra amin'ny tontolon'ny noforoniny.
Miorina amin'ny tantara an-tsary klasika Dia mankany Andrefana , ity andiany ity dia manana an'i Son Goku miatrika fahavalo isan-karazany eo amin'ny làlany lasa tsara kokoa sy mihamatotra amin'ny fizotrany.
Dragon Ball angamba ny manga haiady tsara indrindra any, ary tolo-kevitra azo antoka avy aminay!
Na misafidy ny andian-dahatsoratra na ny remake ianao, Hunter x Hunter dia zavatra tianao tokoa raha tianao My Hero Academia .
Andian-tantara an-tsarimihetsika miorina amin'ny haiady fotsiny io izay manana fitoviana betsaka Dragon Ball , ary fantatrao fa efa nanolotra an'izany izahay .
Hunter x Hunter dia famantaranandro miala sasatra miaraka amina vazivazy, traikefa nahafinaritra, ary ady ary izay no antony anoloranay tena azy.
Mifandraika: 23+ Hunter x Hunter T Shirt hanavao ny fanangonana Anime anao
Kilasika iray hafa, Yū Yū Hakusho manana ny satry iray amin'ireo andiany anime manan-danja indrindra amin'ny haiady amin'ny fotoana rehetra.
Yū Yū Hakusho dia andian-tantara mahazatra tamin'ny taona 90 izay manambatra ny haiady miaraka amin'ireo singa mihoatra ny natiora, ary amin'ny lafiny inona dia mitovy amin'ny eau de Javel .
Ny seho dia tsy maintsy jerena tanteraka ho an'ireo mpankafy anime rehetra raha tsy noho ny tantarany, avy eo amin'ny maha-zava-dehibe ny tantara.
Mifandraika: Ny lisitry ny teny farany Yu Yu Hakusho hanomezana anao fipoahana avy amin'ilay fipoahana
Mitohy ny tantaran'i Son Goku ao amin'ny Dragon Ball Z , izay mitantara ny zava-niainan'i Son Goku nandritra ny naha olon-dehibe azy.
Mitovy ny toerana misy azy ary maro ny toetran'olona taloha miverina, saingy vaovao ny fandrahonana ary mampidi-doza lavitra kokoa.
raha Dragon Ball dia tantara ho avy amin'ny taona, Dragon Ball Z dia tantara momba ny maherifo kokoa izay manaraka ny zava-niainan'i Goku hanavotana ny Tany amin'ny fandrahonana isan-karazany amin'ny habakabaka.
5. Lehilahy iray totohondry
Ny tantaran'ny tovolahy lasa matanjaka be ka afaka mamono olona amin'ny daroka iray monja dia ny tetika lehibe indrindra Lehilahy iray totohondry .
Izy no mankaleo noho izany ary tsy mitsahatra mangetaheta fanamby marina.
Lehilahy iray totohondry dia malaza be ary mandanjalanja tsara ny andiana haiady.
Betsaka ny vazivazy tsara izay azonay antoka fa hankafizinao ny mijery azy.
Mifandraika: Lesona amin'ny fiainana tsotra azo ianarana avy amin'ny lehilahy tokana
Masashi Kishimoto dia mpanoratra ny franchise iray hafa izay manana faritra telo.
Naruto manaraka an'i Naruto Uzumaki, ilay maherifo titular an'ny franchise, nandritra ny fahazazany sy ny fikatsahany ny ho tonga tsara indrindra shobiobi (ninja) amin'ny tontolony.
Naruto mifampiraharaha amin'ny fahatanoran'i Naruto ary mahita azy matotra ho mpiady lehibe, na dia tsy dia feno aza ny lalany tamin'ny faran'ity andiany ity.
Mifandraika: 13+ amin'ireo karazan-tsarimihetsika Anime mampiady hevitra indrindra mandeha amin'ny indostria
Klasika iray hafa amin'ny lisitra, Adventure hafahafa an'i JoJo angamba ny lohateny manan-tantara indrindra eto amin'ity lisitra ity. Miaraka amin'ny tany am-boalohany Dragon Ball .
Ity seho ity koa dia miompana amin'ny haiady sy ady, saingy misy singa mihoatra ny natoraly izay mampiavaka azy.
Hafahafa ilay seho, araka ny voalazan'ny lohateny, fa amin'ny fomba tsara miaraka amina filaharana hetsika lehibe.
Mitohy ny tantaran'i Naruto ao Naruto: Shippuden,
amin'ity indray mitoraka ity dia mahita ady Naruto matotra kokoa tsy ho an'ny tenany ihany, fa ho an'ny ho avy sy ny fiarovana ny tontolon'ny shobiobi (ninja).
Shippuden matroka sy matotra kokoa, manana olon-dratsy tsara kokoa izy ary mitantara tantara matotra kokoa satria maro no atahorana.
Izy io koa dia manana fivoaran'ny toetra tsara ary manaraka ny fivoaran'ny Naruto amin'ny fomba lehibe, nony farany nahita azy nanatanteraka ny nofinofin-jaza.
9. Alchemist fenometaly: Mpirahalahy
Fullmetal Alchemist dia tantara manaitra sy manafana ny fo amin'ny anadahy roa te-hanampy an'izao tontolo izao. Ary mazava ho azy, amboary ny lesoka vitany taloha.
Ny tena izy Fullmetal Alchemist manana fiafarana voalohany satria nalefa alohan'ny nahavitan'ny manga.
Etsy ankilany, firahalahiana manaraka ny manga tany am-boalohany.
Iza amin'ireo no tokony hojerenao? Samy, raha manontany anay ianao!
Mifandraika: 30 amin'ireo teny feno alkimita fenometika feno izay hanampy dikany amin'ny fiainanao
Singa iray Tsy anime haiady, fa ny tantaran'i Monkey D. Luffy sy ny mpiasa piraty.
Iray amin'ireo andiany anime sy manga malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Betsaka ny ady, fa ny fifantohana amin'ny piraty dia ny fifantohana, ny fampandrosoana ny toetra ary ny fikatsahana harena nafenina hatry ny ela.
Izany no antony manosika farany ny seho iray manontolo.
Hahafinaritra anao tokoa Singa iray noho ny zava-niainany asehony. Plus - tena lohateny mahafinaritra indrindra amin'ity lisitra ity izany.
11. Efitra famonoana olona
Efitra famonoana olona dia andian-tantara hafahafa tokoa, saingy tianay izany.
Ny tanjona dia ny vondron'ireo mpianatra amin'ny lisea tsy maintsy mamono ny mpampianatra azy ireo, zavaboary sahala amin'ny horita izay nivoady hamotika izao tontolo izao tao anatin'ny herintaona.
Na dia mampianatra azy ireo ny homeroom aza izy dia mampianatra azy ireo ihany koa ny fomba hamonoana azy.
Mampihomehy ilay seho, misy lesona maro anisa amin'ny fiainana, ary na eo aza ny fiheverana hafahafa - mampanantena izahay fa hankafizinao izany!
Mifandraika: 10 Antony mahatonga an'i Koro Sensei ho mpampianatra tsara indrindra tsy mbola hitanao
Mbola tohin'ny tantaran'i Toriyama tany am-boalohany ihany koa, Dragon Ball Super mandinika bebe kokoa an'i Goku sy ny fivoarany.
Super mitoetra ao amin'ny halalin'ny fiavian'i Goku ary mametraka azy bebe kokoa ho mpamonjy ny Tany.
Ity andiany ity koa dia manangana ny multiverse ary manana an'i Goku hahatratra ny satan'Andriamanitra amin'ny maha mpiady mahery indrindra eto an-tany.
Izy dia miatrika fanoherana biby goavam-be, havana, ary na dia andriamanitra ary mahavita ny tsara indrindra, izany no antony itiavantsika azy sy ny tantaran'i Toriyama hatrany.
Mifandraika: Raha tianao ny Super Dragon Ball, mety mifankatia ianao amin'ireto seho Anime 7 ireto
Sarivongan'ny Dragon Ball Super PVC Super Saiyan God SS Vegito Miantsena miaraka amin'i Amazon Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
Ity anime ity dia mifototra amin'ny singa mavitrika ary manana toerana ara-tantara izy io.
InuYasha manana sehatra ady ampy hahaliana anao raha tianao My Hero Academia .
InuYasha dia karazana kilasika ary azo antoka fa mendrika ny sainao noho ny tantara lehibe sy ny angano manan-karena noforoniny ary asehony.
Mety tsy maintsy zatra ny fomba taloha kokoa ianao, saingy azo antoka fa mendrika izany.
Ankehitriny, Boruto mety hampiady hevitra amin'ny maro amin'ireo mpankafy hardcore Naruto
Izany dia nilaza fa ny andiany mifantoka amin'ny zanakalahin'i Naruto Uzumaki, Boruto Uzumaki, dia mbola tolo-kevitra avy aminay.
Heverinay fa mendrika hijerena tokoa izany.
Ny fitantarana sy ny fomba dia somary tsy mitovy, ny mpandray anjara fototra dia avy amin'ny taranaka vaovao shobiobi (ninja), saingy mbola izao tontolo izao sy ny toerana misy azy ihany.
eau de Javel dia kinova maizina kokoa amin'ny lohateny sasany amin'ity lisitra ity.
Manana haiady mahery vaika sy singa ady, fa mifantoka amin'ny zavatra tsy araka ny natiora, satria i Ichigo, ilay mahery fo, dia tsy maintsy miady amin'ny demonia sy mpanohitra hafa hamonjy ny tontolony sy ny namany.
eau de Javel dia safidy tsara raha tianao ny andalana tantara lalindalina kokoa ary azo antoka fa ho voatarika amin'ny tontolon'ny Tite Kubo ianao raha omenao azy io.
Anime hafa toy ny maherifoko akademia:
NANA tsy manan-talenta.
Ary amin'izany dia afaka mamarana ny lahatsoratray izahay.
Raha tianao My Hero Academia , azonao antoka fa hankafizanao ireo lohateny rehetra amin'ity lisitra ity ary satria lava ny sasantsasany amin'ny lohateny, dia hanana fitaovana tianao mandritra ny fotoana fohy ianao.
Aza adino ny Araho izahay!
Tranonkala mpanoratra: fictionhorizon.com
Ny anime 12 fotsiny toa ny fanafihana amin'ny Titan dia tokony hojerenao
Lesona 5 momba ny fiainana avy amin'ny maherifon'ny maherifoko mba hahatonga anao ho olona tsara kokoa
My Hero Academia Cosplay Fashion Casual High Canvas Shoes Deku Ochako Asui Miantsena miaraka amin'i Amazon Hamantatra bebe kokoa Mahazo komisiona avy any Amazon sy ireo mpiara-miasa hafa izahay raha mividy nefa tsy andoavany vidiny fanampiny aminao.
boaty megalo, tobin'i yuru, asobiase asobase, mamony ao aminao